Isam-ponina 31 401 mponina
Tanjombato dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Atsimondrano, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 31401 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 11715 ary ny kaodin-distrika dia 117
Ny anjaran'ny tantsaha mampiasa zezika simika dia 5-25%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia legioma hafa. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia legioma hafa. Ny isan'omby dia 31. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia legioma hafa. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 100 isan-jaton'ny tanimbary no voatondraka amin'ny tohidrano na paompy. 20 ny mponina no manao asa tanana. 35 ny mponina no miasa tany. 45 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha. 25 no isan'ny kisoa.
Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isan'andro any. Misy fianarana ambaratonga faharoa (lise). Ahitana orinasa mampiasa olona mihoatra ny 50. Andalovan'ny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona 10 hatramin'ny 50. Ahitana orinasa mampiasa olona latsaky ny folo. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Ny JIRAMA no manome ny rano.
Ny isan'ny vono olona tanatin'ny taona 1999-2001 dia 8. Ny isan'ny vakitrano tanatin'ny taona 1999-2001 dia 34. 2 no isan'ireo mpamono olona tratra tanatin'ny taona 1999-2001.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanjombato&oldid=797189"